प्रभुलाइफ इन्सुरेन्सकाे आइपिओ रिजल्ट कसरी हेर्ने ? - DURBAR TIMES
HomeShare Bazarप्रभुलाइफ इन्सुरेन्सकाे आइपिओ रिजल्ट कसरी हेर्ने ?
प्रभुलाइफ इन्सुरेन्सकाे आइपिओ रिजल्ट कसरी हेर्ने ?
प्रभुलाइफ इन्सुरेन्सको रिजल्ट भर्खरै सार्वजनिक भएकाे छ ।
हेर्ने गर्ने तरिका
कृपया तल दिएको लिन्कमा जानुहोला
त्यसपछी आफ्नो BOID_NO लेख्नुहोला
Search मा थिच्नुहोला!
IPO Result यहाँ हेर्नुहोस्
प्रभुलाइफ इन्सुरेन्सको IPO रिजल्ट दरबार टाईम्समा हेर्नुहोस् Search
धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कसिमन घटाएको छ । ब्रोर्ड स्रोतका अनुसार ब्रोकर कमिसन ३३% ले घटाइएको हो । यसबारेमा विस्तृत विवरणभने आउन बाँकी रहेको छ । लामो समयको कसरतपछि बोर्डले ब्रोकर कमिसन घटाएको हो । कमिसन घटेपछि सेयर बजारसुधारमा अझै सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
नेपालमा हाल शेयर बजारमा काराेबार गर्नेहरूकाे संख्या दिनानुदिन बढ्दाे छ । थाेरैलगानीमा राम्राे प्रतिफल आउने र लामाे समयसम्म बजारमा रहन पाउने भएकाले पनिलगानीकर्ताहरूकाे आकर्षण शेयर बजारमा देखिन थालेकाे हाे । अहिले प्राइमरी शेयरमा आवेदन दिने ग्राहकहरूकाे संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेकाे छ। हालैमात्…
शेयर बजारमा चुर्लुम्म डुब्नेहरूले गर्ने १० गल्ती
नेपालमा शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूकाे संख्या दिनानुदिन बढ्दाे छ । थाेरै लगानीमाराम्राे प्रतिफल पाउने आशामा लगानीकर्ताहरू याे व्यवसायमा लागि परेकाे देखिन्छ ।कम्पनीहरूकाे प्राथमिक शेयर निष्कासन हुने क्रम बढेसँगै लगानीकर्ताहरू पनि हाैसलाकासाथ लगानी गर्न उत्सुक देखिन्छन् । पुराना लगानीकर्ताहरूकाे सफलत…
Previous articleघट्याे ब्राेकर कमिसन
Next articleवरुण र साराको ‘कुली नम्बर १’ रिलिज